Paleo macmacaanka Dukumiinka Dood-wadaag ah
Bogga ugu weyn » Book » Paleo Macmacaanka Paleo Desserts Buugga Cuntada BILAASH ah
Maxaad samaynaysaa markaad garanayso sida loo sameeyo macmacaan oo raacaya qorshaha cuntada Paleo? Waxaad ubaahan tahay inaad leedahay xirfad cunto karis ah si aad u diyaargariso macmacaanka dhadhan fiican leh adoon isticmaalin maaddooyinka aan la oggoleyn ama aad u baahan tahay cuntooyinka macmacaanka ee Paleo si aad u adkaato. Midkood midkoodna, ka dib marka cuntooyinka caleenta caleenta ah ayaa aad u adag.
Haddii aad raadineysay cuntada cusub ee macmacaanka Paleo, waxaan kuu haynaa war wanaagsan. Saaxiibkeena Kelsey Ale wuxuu bixiyaa buugiisa macmacaanka Paleo macmacaanka ah ee BUUGSIGA BILAASH ah oo loogu talagalay dadka 500 ee kowaad. Buug-gacmeedka Paleo macmacaanka waxaa ku jira cuntada nafaqada leh ee nafaqada leh ee Paleo oo dhadhan fiican leh. Waxaad nuqul ka heli kartaa nuqul nuqul ah oo buuxa naftaada maanta oo bilaash ah! Waa inaad bixiso maraakiibta.
Kelsey Ale ayaa bixisa buuggan roodhida ah ee Paleo BILAASH ah bilaash ah oo keliya si looga caawiyo inuu ku faafiyo ereyga ku saabsan qorsheheeda cusub ee Paleo. Buuggani waa buug bilaash ah (ma ahan buug digital ah) oo kaliya waa inaad bixisaa khidmad yar oo maraakiibta iyo maareynta. Riix Halkan si aad u hesho buuggaaga! Fadlan ogsoonow: Heshiiska buugan bilaash ah ee Paleo waa mid ansax ah inta alaabtu socoto.
Qolalka Bukaanka Kadib Kalkaalinta Shaqada